C1: ဘာစီလိုနာ-မန်ချက်စတာ, ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်မှာစပိန်အင်ပါယာ? - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ "C1: ဘာစီလိုနာ-မန်ချက်စတာ, ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်မှာစပိန်အင်ပါယာ?
C1: ဘာစီလိုနာ-မန်ချက်စတာ, ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်မှာစပိန်အင်ပါယာ?
ငါးနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်အတွက်အရှင်, ကျဆင်းမှုအတွက်စပိန်ဘောလုံးပါသလဲ ၎င်း၏နောက်ဆုံးချန်ပီယံ, FC အသင်းဘာစီလိုနာ, မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်, စပိန်အင်ပါယာကိုလှုပ်မှအင်္ဂလိပ်ကို quartet မျှော်လင့်ချက်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးခေါက်နေဖြင့် (21h00) နောက်ကျောကအင်္ဂါနေ့လေးပုံတပုံကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့, ပထမဦးဆုံးခြေထောက် (1-0) တွင်မန်ယူအသင်းသိမ်းပိုက်ပြီးမှ, ဘာစီလိုနာဗိုလ်ကြီး Lionel Messi နှင့်သူ၏တပ်များဥရောပတိုက်တွင်ပျောက်ဆုံးသွားကြပြီမဟုတ်ရှိရာစခန်း Nou, ၎င်း၏ impregnable ရဲတိုက်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အနေအထား၌ဤဒုတိယပြိုင်ပွဲအမှာစကားပြောကြား (2013 အောင်ပွဲသုည 27)3ကတည်းက။
ဒါပေမယ့်သရဲနီတို့အဋ္ဌမ (0-2, 3-1) အတွက် Parc des မှူးမတ်မှာပဲရစ်စင်ကာပူဒေါ်လာ debunked တော်မူပြီးမှ, ထွက်မကြောက်ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ယောက်သတိပေးချက်များနှင့်တူ Real Madrid အသင်းနှင့်အက်သလက်တီကိုအသံအစောပိုင်းထွက်ပေါက်: ကလာလီဂါအတွက်လေးပုံတစ်ပုံ-C2010 အတွက်တစ်ဦးတည်းသာကိုယ်စားလှယ်ရှိပါတယ် 1 ကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်တစ်ဦးကဝိရောဓိမက်ဒရစ်အတွက်ကစားနေသည် ... 2010 အဖြစ်။
"ကျနော်တို့ကစပိန်လာလီဂါ၏တစ်ခုတည်းသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများမှာပါကပုံမှန်ထက်တစ်ခုခုမဟုတ်ဘူး" ဟုဘာစီလိုနာနည်းပြ Ernesto Valverde 100% ရီးယန်းဆုရရှိသူ (Real Madrid အသင်းများအတွက်လေး C1 များအတွက်တဦးတည်း၏ငါးနှစ်အတွင်းအပြီး, ဝန်ခံ ဘာစီလိုနာ) ။
ဒါဟာရာသီ, အင်အားကြီးအင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်တန်းဥရောပ 8, 2009 ကတည်းကတစ်ဦးပထမဦးဆုံးမှလေးကလပ်အရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့သည်။ နှင့်၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်လမ်းဘာစီလိုနာအတွက်မတ်တပ်ရပ်: အ blaugrana အသင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အောင်မြင်သောလျှင်က semifinals FC အသင်း Porto (2-0) ကိုသွားကြဖို့တစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း option ကိုယူသောသူသည်လီဗာပူးလ်အတွက်ဆုံမှတ်နိုင်ဘူး။ နောက်ဆုံးအများစုမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့စပါး, မန်ချက်စတာစီးတီးဆုရှင် 1-0 မဆိုင်ပါဘူးလိမ့်မည်။
- စပိနျအင်္ဂလိပ်တွင်း -
အောက်ကကြမ်းပြင်တွင်, ယူရိုပါလိဂ်အတွက်ကျနော်တို့နှစ်ခုအင်္ဂလိပ်အသင်းများ (ချယ်လ်ဆီးနှင့်အာဆင်နယ်) နဲ့ semifinals နှင့်တစ်စပိန်ကလပ် (ဗလင်စီယာ) အံ့သြ မှလွဲ. ဦးတည်နေကြတယ်။
"ဒါဟာပရီးမီးယားလိဂ်ဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုအဆင့်ကိုတစ်ဦးလိဂ်ကြောင်းပြောနေတဲ့ကျုံးမရဖြစ်ပါတယ်" ဟု Valverde ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
ထိုကအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေ, အလှဆုံးဆုဖလားနှင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရုပ်မြင်သံကြားအခွင့်အရေးအတွက်စပိနျအင်္ဂလိပ်တွင်းပြန်လည်။ ဒီဧရိယာများတွင်ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာလာလီဂါ (အနည်းဆုံး 3,3 ဘီလီယံ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (အကြောင်းကို2ဘီလီယံအထိနှစ်စဉ်ကောက်ယူနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနိုင်ငံခြားပြည်တွင်းစျေးကွက်) တစ်ခုအစွန်းရှိပါတယ်။
တဦးတည်းလည်းဂွာဒီယိုလာ (မန်ချက်စတာစီးတီး) အဖြစ်လူသိများနိုင်ငံခြားပညာရှင်များ၏အလှူငွေအသိအမှတ်ပြုရပါမည် Zinedine ဇီဒန်း၏အမြင်, Jürgen Klopp: ဒီဘဏ္ဍာရေးအစှမျးသတ်တိကိုဗြိတိသျှတန်ခိုး၌မြင့်တက်လာပေမယ့်ကန့်သတ်မအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် (လီဗာပူးလ်) နှင့် Mauricio Pochettino (စပါး) ။ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုကသူ Ole ကို Gunnar Solskjærအားဖြင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာအစားထိုးခဲ့သည်။
- အင်္ဂလိပ်တို့ကအံ့အားသင့်ဇီဒန်း -
တနင်္ဂနွေ Real Madrid အသင်း၏ပြင်သစ်နည်းပြအပေါ်ခန့်မှန်းခြေကဒီအဆင့်မှာ "ဤအင်္ဂလိပ်ကလပ်အသင်းကိုမြင်ရဖို့ကျွန်မကိုအံ့သြပါဘူးတဲ့ဘောလုံးတက်ဖြစ်ပါတယ်" ။ နည်းပြကဤအဖွဲ့များကိုဦးဆောင်နေကြသောကြောင့် "ထို့နောက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာ, သူတို့ရဲ့အသစ်အဆန်း, သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဆောင်ခဲ့ရမည်။ အဆိုပါအသင်းအဖွဲ့ကောင်းသောဖြစ်နိုင်သည်။ "
ရီးရဲလ်နှင့်ဘာစီလိုနာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေနှင့်အတူနှစ်သင်းနေစဉ်ဇီဒန်းက "အိမ်ဖြူတော်" ပြန်ဆောက်ဖို့အစောပိုင်းမတ်လပြန်ပြောပြ, သို့ရာတွင် Deloitte ၏အဆိုအရ, စပိနျကလပ်သံသရာ၏အဆုံးမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသေချာ။
"စပိန်ဘောလုံးနေဆဲလာမည့်နှစ်တွင်မှ, နေရာရှိပါတယ်" ဟုအဆိုပါပြင်သစ်သတိပေးခဲ့သည်။ "ငါသည်စပိန်ပတ်ပတ်လည်ခြိမ်းခြောက်နေသည်မထင်ကြဘူး။ "
ဘာစီလိုနာ 2015 ကတည်းကသူ့ရဲ့ပထမဆုံး semifinal ရောက်ရှိရန်နှင့် quarterfinals အတွက်သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ကျရှုံးဖျက်ပစ်ရန်စခန်း Nou မှအင်္ဂါနေ့ကအတည်ပြုဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းတစ်ဦးကဟောကိန်း။
overconfidence မရှိရင်: တစ် 2017 ထဲမှာ "remontada" PSG အသင်း (0-4, 6-1) ထိမှန်ပြီးတော့ရောမမြို့ (4-1, 0-3) တွင်တစ်ဦးသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ခံစားနေရပြီးပြီးနောက်, Catalan များမှာ ကောင်းစွာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်၎င်း၏ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့်သည်ပေါလု Pogba သတိထားဖြစ်တင်လိုက်တယ်။ ထိုအခါစပိန်အင်ပါယာ၏ရေရှည်တည်တံ့ရေးရှယ်ယာမှာဖြစ်ပါတယ်။
က CAF: အာမက်အာမက်ကဒီမှာအသေးစိတ်များမှာလိင်အရှုပ်တော်ပုံအတွက်ဖမ်းမိ